Xukuumadda oo soo saartay Amarro cusub ee faafidda Covid-19 (Goobaha Waxbarashada oo la xiray..) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Xukuumadda oo soo saartay Amarro cusub ee faafidda Covid-19 (Goobaha Waxbarashada oo la xiray..)
Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda Federalka Soomaaliya H.E. Maxamed Xuseen Rooble, markii uu qiimeeyey soo laba kaclaynta xanuunka COVID-19.
Markii uu dib u eegis Ku sameeyey go’aamadii hore ee Xukuumadda Isla markaana tixgeliyey talooyinkii iyo soo-jeedimihii Guddiga Qaran ee ka Hortaga iyo Xakameynta Cudurka Covid19:
Previous articleMaxaad ka taqaan xubnaha Guddiga loo magacaabay Baarista Dhacdooyinkii 19-ka Febraayo? (Warbixin)
Next articleAxmed Madoobe oo Hal shardi ku xiray ka qeyb galka Shirka looga hadlayo Heshiiska Doorashada